Iphrinta ye-UV ephathekayo yezinkuni China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-UV ethebhulethi yase-UK,Iphrinta ye-UV ethempelini yokuthengiswa,Iphrinta ye-UV ethebhulethi yasePhilippines
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > Iphrinta ye-UV ephathekayo yezinkuni
Umshini wokunyathelisa we-RF-A3UV ojwayelekile we- UV, sinezinhlobo ezimbili zeyinki, i-synthesis inkino kanye neyinki esekelwe ngamafutha, ngoyinki, okwenzelwe izinto ezihlukahlukene, kubonakala kungokwemvelo futhi akulula, kungagcina iminyaka engaphezu kwengu-5 .
Yonke iphrinta ye-UV ephathekayo ozoyithola ngomshini owodwa ojwayelekile, kuhlanganise ne-Software U disk, ibhuku lesithombe, i-CD yesithombe, inkinobho eyodwa yokusetha, i-Screwdriver, i-syringe.
Iphrinta ye-UV ephrintiwe yezinkuni uhlobo oluthile lokusetshenziswa kwe-ink ye-jet uhlobo lwemishini ye-digital, iphrinta ye-UV ephrintiwe ngokudayiswa kwe-UK application enkulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo zephrinta lethu le- UV elidayiswayo eNingizimu Afrika RF-A3UV:
Iphrinta ye-UV ethebhulethi yase-UK Iphrinta ye-UV ethempelini yokuthengiswa Iphrinta ye-UV ethebhulethi yasePhilippines Iphrinta ye-UV ethebhulethi yase-Australia Iphrinta ye-UV ephepheni encane Iphrinta ye-UV ephepheni Iphrinta ye-UV ephathekayo yaseKorea Iphrinta ye-UV ephathekayo UK